Igumbi Elincinci Elintofontofo Kwiflethi Esetyenziswa Nangabanye Abantu Ehost - I-Airbnb
Igumbi Elincinci Elintofontofo Kwiflethi Esetyenziswa Nangabanye Abantu Ehost
Igumbi lakho lokulala e ihostela sinombuki zindwendwe onguMel
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMel iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eli gumbi linye yinxalenye yeflethi, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi kunye nezinye iindwendwe. Yenye yeendawo zethu zokuhlala ehostela, ngoko uza kufumana ithuba lokunxibelelana neendwendwe ezininzi ezisemagqabini, uze ukwazi ukusebenzisa ipuli kunye neveranda. Isesitratweni esisecaleni kweendawo zokuhlala eSandy Bay, malunga nemizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo ukuya kunxweme lweSandy Bay kunye nemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiidolfini eAnthony 's Key.
Igumbi linebhedi enye, itafile yasebusuku kunye nekhabhathi, kwaye ingaphakathi kwiflethi, igumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu, ikhitshi kunye nebhalkhoni kunye nezinye iindwendwe ezimbalwa.
I-Sandy Bay yindawo entle yokubona ubomi bokwenene besiqithi. Ihlala abantu abaninzi, kodwa inezinto ezimbalwa ezinomtsalane ezifana neCarambola Botanical Gardens, iidolfini eAnthony 's Key, iOctopus Dive School neevenkile zokutyela ezifana neThe Beach Grill kunye neSunken Fish. Kukho nee 'comedores' zasekuhlaleni ezingabiziyo ezithengisa ukutya okuqhelekileyo. Kukho iindawo eziyi-2 zokolwandle eSandy bay- elona likufutshane yimizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo: ayinamtsalane kakhulu, kodwa ine-snorkeling enkulu eyi-200 phandle. Elinye icandelo lolwandle likumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo, kwaye lihlala libhetele.
Ndihlala endlini ibe ndisoloko ndikufutshane ukuze ndincede iindwendwe zam. Ukuba kufuneka ndenze izinto endinokuzenza, uBelkis undisebenzela ixesha elizeleyo, ibe ndidla ngokuba nomncedisi wokuvolontiya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sandy Bay